आज वि.सं.२०७६ साल फाल्गुन २५ गते आइतबार, कुन राशिको भा’ग्यफल कस्तो छ ? – Khabarhouse
आज वि.सं.२०७६ साल फाल्गुन २५ गते आइतबार, कुन राशिको भा’ग्यफल कस्तो छ ?
Khabar house | २५ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०१:३१ | Comments
ज्योतिषि गणेश काफ्ले । वि.सं.२०७६ साल फाल्गुन २५ गते । आइतबार । ईश्वी सन् २०२० मार्च ०८ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । परिधावी संवत्सर । उत्तरायन । शिशिर ऋतु । श्रीशाके १९४१ । फाल्गुन शुक्लपक्ष । तिथि– चतुर्दशी, ४९ घडी २० पला,रातको ०२ बजेर ०७ मिनेट उप्रान्त पूर्णिमा । नक्षत्र– मघा,५२ घडी ५३ पला,रातको ०३ बजेर ३२ मिनेट उप्रान्त पूर्वाफाल्गुनी । योग–सुकर्मा,३४ घडी ५२ पला,बेलुकी ०८ बजेर २० मिनेट उप्रान्त धृति ।
मेष : अध्ययन तथा अध्यापनमा समय राम्रो रहेकोले भनेजस्तोे उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । आम्दानीको तुलनामा खर्च कम हुने हुनाले अन्य स्थानमा लगानी गर्न सकिने छ । काम गर्ने वातावरण राम्रो बन्ने हुनाले आर्थिक अवस्थामा सुधार भएर जानेछ । आफन्त तथा मन पर्ने मानिसबाट उपाहार तथा विलाशि बस्तु उपाहार प्रा’प्तीको योग रहेकोछ । सन्तान तथा छोराछोरीको प्र’गति देख्न पाइनेछ ।
बृष : अध्ययन अध्यापनमा अलि बढी समय खर्चिँदा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । कुनै काम शुरु गर्नु भन्दा पनि पुरानै कामहरुलाई निरन्तरता दिनुहोला । चाहँदा चाहँदै पनि घरायसि सुख सुविधाहरु प्रयोग गर्न नपाउदा मन खिन्न हुने छ । काम बिग्रने हुँदा राजकिय सम्मान पाउने योग टरेर जाने तथा राजनीतिमा प्रतिस्पर्धिहरु हावि हुने छन् । छातिमा देखिने स’मस्याका कारण काम गर्न नसकेजस्तो हुनेछ । घर परिवार तथा साथीहरुबाट टा’डिएर परदेशको यात्रा गर्नुपर्दा असहज महशुस हुनेछ।
मिथुन : पारिवारिक असमझ्दारीले कामहरु गर्न केहि कठिनाई हुनेछ भने दाजुभाइसँग विवाद बढ्ने योग रहेकोछ । कुनै पनि काम गर्नको लागि गरिने यात्रा कष्टप्रद हुन सक्छ । व्यापारमा लगानी गरिहाल्ने समय रहेको छैन । प्रेममा अरुकै नकारात्मक टिका टिप्पणीले अ’विश्वास बढ्न सक्छ । स्वास्थ्यमा स’मस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । आट तथा प’राक्रम गर्न नसक्दा हातमै आउन लागेको काम फुत्कनेछ ।
कर्कट : बोलिबचनमा मिठास आउने तथा बोलेरै धेरै कामहरु गर्न सकिनेछ । गीत संगीत तथा यस्तै क्षेत्रमा समय खर्चँदै हुनुहुन्छ भने प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ। धन तथा भौतिक सम्पति राम्रोसँग परिचालन गरि आम्दानी बढाउन सकिनेछ । माया प्रेममा आत्मियता बढ्नेछ भने पारिवारिक माहोलमा जमघट भई स्वादिष्ष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । भोजनसँग सम्बन्धित व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
सिंह : कुनै पनि कामको नतिजा तुरुन्तै खोज्दा अन्य कामहरु पनि प्रभावित हुनेछन् । व्यवसायमा लागनी गर्दा तत्काल कुनै फाइदा नदेखिए पनि पछिको लागि राम्रो रहनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेछ भने यही बेलामा रुपैयाँ पैसा माग्ने हरु आउनेछन् । तरपनि राजनीति तथा सामाजिक काममा जनताको भनेजस्तो स’मर्थन प्राप्त हुनेछ । परिवारमा आफन्त तथा जीवन साथीसँग गहिरो आ’त्मियता रहनेछ ।
कन्या : खर्च भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले स्वास्थ्यमा समस्या आई उपचार तथा औषधि खर्च बढेर जानेछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेपनि आम्दानी कम हुनेछ भने विदेशमा उत्पादित सामानको व्यापार भने फस्टाएर जानेछ। पढाइ लेखाइ मा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । आफुभन्दा अग्रजसँग राय बाजिने तथा म’नमुटाब बढ्ने योग रहेकोछ । प्रेममा अविश्वास तथा मनमुटाब बढ्नेछ ।
तुला : विद्यामा राम्रो प्रगति हुने हुँदा पढाइ लेखाइमा मन जानेछ । दाजुभाई वा अग्रजहरुको सुझाव तथा सल्लाह मानेर अगाडि बढ्दा सफलता पाउन सकिनेछ । नयाँ कामहरु गरेर आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ भने विभिन्न अवसर हरुले पछ्याउने हुँदा राम्रा परिणाममुखि काम गर्न सकिनेछ । खनिज पदार्थको प्रयोग मार्फत य’थेश्ट धन आर्जन हुने ग्रह योग रहेकोछ । नयाँ सवारी साधन तथा मन परेको भौतिक सम्पति लाभ हुने गतिलो सम्भावना रहेकोछ ।
बृश्चिक : शरिरमा घाउ,खटिरा तथा चोटपटकको भए रहनेछ। आफन्तसँगको लेनदेन कारोबारले शत्रुत्रा बढ्नेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाब बढ्ने तथा श्रीमान श्रीमतिबीचको सम्बन्धमा उतार चढाब बढ्नेछ । तरपनि आफन्त तथा बुवाको सहयोगले राम्रा तथा परिणाममुखि काम गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काममा मन जानेछ ।
धनु : सामाजिक काम गरि समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जाने तथा आफन्तहरुलाई खुशी पार्न सकिनेछ। आफ्नो रितिरिवाज जोगाउने काममा समय खर्च हुनेछ भने तिर्थ यात्राको प्रसस्त सम्भा वना रहेकोछ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाई प्रसस्त नाफा कमाउने समय रहेको छ । प्रेम प्र’शंगमा रमाउन चाहनेहरुका लागि दिन उत्तम रहेकोछ ।
मकर : पढाइ लेखाइकै सवालमा देश विदेशको यात्रा तय हुनेछ । माया प्रेमको सम्बन्ध विवाहमा परिणत गर्ने सहमति जुट्नेछ। मध्यान्हबाट कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने हुँदा दुख पाउने समय रहेकोछ भने आर्थिक व्यावस्थापन गर्न नजान्दा घरायसि समस्याहरु सुल्झाउँन असजिलो हुनेछ । बैक तथा बित्तिय सस्थामा गरिएको लगानीबाट भने थोरै भएपनि आम्दानी हुनेछ । सामान्य स्वास्थ्य स’म्बन्धि समस्या हुनसक्छ ध्यान दिनुहोला ।
कुम्भ : व्यवसायिक तथा मनोरञ्जनात्मक यात्रा हुनेछ । व्यापार फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने समय रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा अरुदिन भन्दा सुधार भएर जाने तथा नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ । पारिवारिक जमघटमा सामेल भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । नया ठाउँमा नया नियूक्ति तथा काम गरिरहेको ठाउँमा बढो’त्तरि हुने योग रहेकोछ । प्रे’ममा नजिक भई रमाउन सकिनेछ ।
मीन : मौषमि रोगको प्रकोपले समस्या निम्त्याउनेछ भने हाड जोर्निहरुमा समस्या आउन सक्छ ध्यान दिनुहोला । सवारि चलाउदा ख्याल गनुहोला चोटपटक तथा दुर्घटना हुने योग रहेको छ । कुनै पनि विवादित विषयमा सामेल नहुनु नै राम्रो रहेकोछ भने न्य’यिक निर्णयहरु तपाईको पक्षमा आउने छैनन् । पढाइ लेखाइमा मन नजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । प्रेममा आजको दिन नभे’ट्दानै राम्रो रहनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस् ।